छोरा विदेश फर्किएको एक दिनपछि फ्रान्सका लागि पूर्व नेपाली राजदूत केशव झाको हत्या, टाउकोमा तीन, घाँटीमा दुई चोट भेटियो - Enepal Serofero
काठमाडौं- फ्रान्सका लागि पूर्व नेपाली राजदूत केशव झाको हत्या रहस्यमय बनेको छ। ८० वर्षका झा सोमबार बिहान बबरमहलस्थित आफ्नै घरको भुइँतलामा रहेको कोठामा सुतेकै ठाउँमा घाँटी रेटिएको अवस्थामा भेटिएका थिए।
आयरल्यान्डमा बस्दै आएका छोरा बुहारी विदेश फर्किएको एक दिनपछि झाको हत्या भएको हो। झा श्रीमतीसहित उक्त घरमा बस्दै आएका थिए।
सेक्युरिटी गार्ड र भान्सा दुवैमा काम गर्ने एक कामदार पनि उनीहरुको साथमा थिए। उनी कहिले त्यहीँ बस्थे भने कहिले आफ्नै घरमा जान्थे। प्रहरीका अनुसार ती कामदार आइतबार भने आफ्नै घर फर्किएका थिए। ती कामदारले घरको बाहिरि ढोका साँझ आफैले बन्द गर्थे भने बिहान आफैले खोल्थे।
अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीका अनुसार आइतबार ७ बजेको समाचार हेरेर झा भुइतलामा सुत्न झरेका थिए। श्रीमती भने पहिलो तलामा सुत्ने गर्थिन।
बिहान चिया खान उठाउन खोज्दा झा नउठेपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो। झा सुतेको कोठाको झ्यालकाे जाली काटेको पाईएको छ भने उनी सुतेको कोठामा एउटा चक्कु पनि बरामद भएको छ।
प्रहरीका अनुसार झा सुतेको कोठाको झ्यालको जाली काटेर चुकुल खोलेको पाइएको छ । कुटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो दख्खल राख्ने झा १९९३ देखी १९९७ सम्म फ्रान्सका राजदूत थिए । पूर्व राजदूतहरुको निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका उनले लामो समय चिफ अफ प्रोटोकलको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
‘उहाँलाई विहान मैले देख्दा बेडमा रक्ताम्मे अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो,’ झालाई हेर्न विहानै बबरमहल पुगेका युवराज अधिकारीले भने, ‘उहाँको हत्या नै भएको हो, किनभने हामीसँग बारम्बार भेट हुँदा उँहा आत्महत्यालाई घृणा गर्नुहुन्थ्यो ।’
घरको मुल ढोका भने बन्द रहेको अवस्थामा झाको हत्या भएकाले अनुसन्धान गहनरुपमा भइरहेको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले जनाएको छ।
झाका एक छोरी पनि छन्। – From : taja khabar
भरतपुरस्थित नयाँ मेडिकल कलेजमा उपचारधीन सिम्रौन पौडेलको पैसाले गर्दा उपचारमा समस्या !
कहाँ गयो मानवता ? छिमेकिले मलामी जान नमान्दा आमाको लासलाई साइकलमा राखेर सरोजले यसरी घाट पुर्याए !
जनकपुरमा दुःखद घटना, प्राधिकरणको लापरवाहीले यसरी गयो दुई जनाको ज्यान
आफ्नै बच्चालाई मारेर फल्ने आमा काठमाडौँबाट पक्राउ !
Prevफेरि काल बनेर आयो ट्रक दुई जना पैदल यात्रीको ज्यान लियो
Nextअशोक दर्जीको घर निर्माणको लागि झापामै पुगेर ऋषि धमलाले गरे यति ठुलो सहयोग, सहायो गर्दै स्टेजबाट यसरि गरे अशोकको तारिफ (भिडियो)